सम्पादकीय – Online Bichar
सम्पादकीय, २० जेठ २०७८ ‘नाच्न नजान्ने आँगन टेढो’ भन्ने लोक प्रचलित भनाई गौरादह नगरपालिका जनप्रतिनिधिमा मेल खाएको छ । चामल प्रकरणमा गौरादह नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले आफूबाट भएको कमजोरी स्विकारेनन् उल्टै दातालाई र प्रकृतिलाई दोसी करार गरे । गल्ती नस्विकार्ने र जबरजस्त ढाकछोप गर्नेले थप गलत गर्दै जान्छ यो सर्वस्विकार्य मान्यता हो । ठूलो परिमाणमा चामल कुहाएको र गुपचुपमा खाडलमा पुरेर नष्ट गरेको स्थानीयबाट बिरोध भएपछि जवाफ दिन बाध्य भएको नगरपालिकाले कमजोरी ढाकछोप गर्न एउटा बिज्ञप्ति निकाल्यो तर त्यो बिज्ञप्तिमा आफू चुकेको…
सम्पादकीय, ३१ वैशाख २०७८ अनलाइनविचार, झापाको गौरादह नगरपालिकाले गोदाममा भण्डारण गरेको पाँच हजार केजी चामल कुहिएको अवस्थामा छ । गरिबीको रेखामुनिको जीवन बाँच्दै गरेका गौरादहका अतिबिपन्न नागरिकलाई यो १२५ मन चामल कुहिएको समाचारले कति दुखेको होला ? तर बिडम्बना !! यहाँका जनप्रतिनिधिलाई महामारीको बिषम परिस्थितिमा खाद्यान्न कुहिएको बिषयले कत्ति पनि दुखेको छैन । चामल कुहिएको विषयमा विभिन्न संचार माध्यम तथा सामाजिक संजालमा तस्वीर सहित समाचार प्रकाशन भए । तर यो सूचना र समचारले गौरादहका जनप्रतिनिधिलाई अहिले सम्म पनि छोएको छैन…
शान्ति सुब्बा गौरादह, १८ फागुन २०७७ । डि.नरबहादुर बस्नेत स्मृति प्रतिष्ठानको प्रथम साधारण सभा तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । झापाको गौरादह–१ मा रहेको जानकीश्वर शिवालय मन्दिरको प्राङ्गणमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि संविधान सभा सदस्य दिपक कार्कीले उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै स्वर्गीय डिठ्ठा नरबहादुर बस्नेतको स्मरण गर्नुहुँदै वहाँले गौरादहको पहिचान बनाउन गर्नुभएको योगदानको चर्चा गर्नुभएको थियो । कार्यक्रम पहिलो चरण र दोस्रो चरणमा गरि सञ्चालन गरिएको थियो । डि.नरबहादुर बस्नेत स्मृति प्रतिष्ठान तथा जानकीश्वर गुरुकुल…
शिक्षामा अदुरदर्शी गौरादह नगरपालिका
सम्पादकीय २९ माघ २०७७ । गौरादह नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रको विकासमा गर्नैपर्ने आधारभूत कामहरु थुप्रै छन् तर नगरपालिकाको प्राथमिकतामा शिक्षा कहिल्यै पर्न सकेको देखिदैन । जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएको ४ बर्षमा पनि गौरादह नगरपालिकामा नगर शिक्षा समिति गठन हुन सकेन । नगर शिक्षा ऐन हाल सम्म पनि बनेन । त्यस्तै नगरपालिकाले अनिबार्य जारी गर्नुपर्ने नगर शिक्षा विकास योजना हाल सम्म पनि जारीहुन सकेन । शिक्षा प्रति अनुदार र अदुरदर्शी जनप्रतिनिधिहरुको कारण गौरादह नगरपालिका शिक्षा क्षेत्रमा पछाडि पर्दै गएको छ । गर्नुपर्ने आधारभूत…
सरकारको लगाम जनताको हातमा हुनपर्छ
सरकार भनेको जनताको हितमा राज्यका नियम कानुनहरु लागु गर्ने शासनको मुख्य अंग हो । लोकतन्त्रमा सरकारको नियन्त्रण जनताको हातमा हुनुपर्छ । सरकार जनताले अंकुश लाउन नसक्ने भयो भने स्वेच्छाचारी र निरंकुश हुन्छ । लोकतान्त्रिक शासन ब्यवस्था बलियो र जनमुखी बनाउन जनताले सरकारको लगाम आफ्नो हातमा लिनु पर्छ। दलीय ब्यवस्थामा सरकारमा जनताको लगाम भन्नाले पार्टीले सरकारको नियन्त्रण गर्नु हो । नेपालमा पटक पटक दलहरुलाई बहुमत दिएर सरकार चलाउन जनताले अवसर दिएकाछन् । बिडम्बना ! सरकारमा पुगेपछि सरकारको नेतृत्व पार्टीको अथवा जनताको…
राष्ट्रियता स्वाभिमानी नागरिकको प्राण हो
सम्पादकीय ३० वैशाख २०७७ मंगलवार आज नेपाल र नेपालीको राष्ट्रियता आत्मासम्मान र स्वभिमान गम्भिर आघात पुगेको छ । भारतबाट सिमा अतिक्रमणका श्रृंखलाहरु थपिएका थपिएकै छन् । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता, कालापानी र टनकपुर लगाएतका नेपाली भूभाग अतिक्रमण गर्दै कहिले दशगजाका जंगे पिल्लरहरु सार्ने त कहिले बाँध बाँध्ने, कहिले नाकाबन्दी लगाउदै शहिष्णु नेपालीलाई अपमान गरिरहेको छ । नेपाली भूभाग लिम्पीयाधूरामा भारतले सडक खनेर उद्धघाटन गरेको घटनाले स्वाभिमानी नेपालीको रगत उम्लिएको छ । नेपाल सरकारले अबिलम्ब आफ्ना नागरिकको मनोविज्ञान बुझेर पहल कदमी उठाउन…
संघीय र प्रदेश सरकारबीच अधिकार क्षेत्रको विवादका कारण सञ्चालनमा आएको विषादी प्रयोगशाला प्रभावहिन
बिराटनगर, २१ साउन । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा स्थापना गरिएको विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला प्रभावहिन देखिएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारबीच अधिकार क्षेत्रको विवादका कारण सञ्चालनमा आएको तीन साता बितिसक्दा पनि विषादी प्रयोगशाला प्रभावहिन देखिएको हो । गत असार २५ देखि सञ्चालनमा आएको सो प्रयोगशालामा एक महिनाको अवधिमा भारतबाट आयातीत तरकारीको केवल २६ वटा नमूना परीक्षण भएको छ । दुई घण्टाभित्र १५ वटा मात्र नमूना परीक्षण गर्न सक्ने प्रयोगशालाका प्राविधिक सहायक घनश्याम बरालले बताउनुभयो । तर,…
नेपाल हरेक कुरामा परनिर्भर रहनु पर्ने बाद्यात्मक अवस्था रहदै आएको छ । खाद्यान्न, लत्ताकपडा, तेल नुन देखि औधोगिक मेसिनरी सामानसम्म विदेशको भरमा चल्नु परिरहेको छ । अहिले कार्पेट र गार्मेन्ट्स तथा अलैँची, अदुवा जस्ता केही परम्परागत उत्पादन र केही सीमित औद्योगिक उत्पादन निर्यातमा खुम्चिएको छ । गृहको तथ्यांक अनुसार नेपालको सबैभन्दा बढी व्यापार हुने भारतसँग मात्रै कुल व्यापार घाटाको ६५ प्रतिशित पुगेको छ । यो चित्र आफैँमा अर्थतन्त्रको स्वस्थ सूचकांकका दृष्टिले गम्भीर अवस्थाको संकेत हो । तर, नेपालको व्यापारको प्रवृत्तिका…
सब्जीमा विषादीको समस्या
सम्पादकीय, २० कात्तिक पछिल्लो समय हामी खानामा विषादी खाइरहेका छौं । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा खानामा विषादीको प्रयोग भएको पाइन्छ । दैनिक खानामा प्रयोग हुने तरकारी स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले यो स्तरको जोखिममा हुँदा पनि कुनै अनुगमन, नियमन नहुनुले उपभोक्ता अधिकारको हाम्रो निरीह अवस्था प्रस्ट देखाउँछ । एकातिर स्वास्थ्य प्रतिकूल त्यसमाथि महँगीले छोइनसक्नु तरकारी उपभोग गर्न सर्वसाधारण बाध्य छन् । सर्वसाधारण उपभोक्ता बिचौलियाका कारण तरकारीका लागि किसानले पाउनेभन्दा दुई गुणाभन्दा बढी मूल्य तिर्छन् । त्यसकारण सरकारले तरकारी उत्पादन, यसको आयातसँगै बजारमा बिक्री…
ज्येष्ठको सम्मान बृद्धाश्रम होइन
सम्पादकीय हरेक मान्छे सामाजिक भएर बाँच्न चाहन्छ । मान्छे जति बुढ्यौली हुँदै जान्छ, त्यति नै परिवारको साहरा, साथ र सहयोग चाहन्छ । ज्येष्ठ नागरिक समाजका उदाहरणीय पात्र हुन् । सबै नागरिकलाई परिवार र समाज अपरिहार्य आवश्यकता हो । परिवार जीवन निर्वाह गर्ने मानवीय आवश्यकता पनि हो । समाज जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्तको आवश्यक थलो हो । परिवारले मनोभावलाई ह्रास हुनबाट बचाउँछ भने समाजले व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा र सम्मान प्रदान गरी मनमा रहेका कुण्ठालाई न्यूनिकरण गर्छ । जीवनको उत्तरार्ध अवस्था भनेको नै…